Cockapoo: Ihe niile anyị hụrụ n’anya gbasara Cocker Spaniel Poodle Mix - Dịrị
Ghọ otu n'ime nkịta ndị na-ewu ewu kachasị ewu ewu , na Cockapoo na-agwakọta ike na àgwà nke Cocker Spaniel na obere ịwụfu, uwe mkpuchi nke Poodle.
Ihe si na ya pụta bụ nkịta dị obere, onye na-agbanwe agbanwe ma mara mma!
Ha na-agbasi mbọ ike igwu mmiri, na-achụ ọsọ ma na-agbago, mana enwere mmetụta na-ezukọta na ikpere gị mgbe ị na-anụ kọfị.
A na-ahụ Cockapoos n'ọtụtụ agba na usoro - ọ dabere na nne na nna ha. Otu ihe ị ga-amata ozugbo bụ uwe ha na-acha uhie uhie na ihu ihu ha.
Ha na-abụkarị ndị maara ihe, ndị na-apụ apụ na ndị nwere obi ụtọ.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịmatakwu maka Cockapoo ndị a ma ama, anyị nwere ihe niile ịchọrọ ịma maka mkpakọrịta a na-atọ ụtọ ma nwee ịhụnanya.
Kedu ihe bụ Cockapoo?
Ebee Ka Cockapoo Si Bịa?
Ndi Cockapoo bu ezigbo nkita nke ezi na ulo?
Cockapoo ọ dị mma?
Kedu ihe Cockapoo yiri?
Cockapoo zuru oke
Olee otú Iji-alụ nwanyị ọhụrụ A Cockapoo
Etu esi eche banyere Nkita Cockapoo
Ego Ole Ka I Kwesịrị Inye Otu Cockapoo?
Olee otú Iji Zụọ A Cockapoo
Na Cockapoo bụ ihe si na ya pụta mating a Cocker Spaniel (American or English) with a Poodle (Toy ma ọ bụ Miniature).
Agbanyeghị na amabeghị mgbe mbụ Cockapoo na-eri nri, a na-eche na ọ bụ dị ka afọ ndị 1950.
N'oge na-adịbeghị anya, mmụba nke nkịta Cockapoo abụwo nnukwu ekele maka ịwụfu ha dị ala na uwe mkpuchi ndị ọzọ.
Ebe ụfọdụ Cockapoos nwere ọrụ ha ga-arụ, dị ka Dennis ọgwụgwọ nkịta , a na-azụ ha na mbụ ịbụ nkịta ndị na-esonyere ha.
Cockapoo nwere ike inwe njirimara niile ma ọ bụ nke nne na nna ya, yabụ ka anyị lelee ndị nne na nna anya na obere nkọwa:
Cocker Spaniel: Nkịta Na-arụ Ọrụ Site na England Ma ọ bụ American
Maka ụdị ngwakọta a, nne ma ọ bụ nna nwere ike ịbụ American Cocker ma ọ bụ Cocker Bekee.
Ebuputala ya dị ka nkịta na-achụ nta (ọkachasị nkịta egbe) ha na-eso imi ha iji tụpụ nnụnụ ikuku ka a gbaa ha.
Ha dị ụtọ ma nwee ọgụgụ isi.
Kwesịrị ekwesị maka ezinụlọ n'ihi na, ọ dị mfe ịzụ, mana ha nwere ike nwee mmetụta ọsọ ọsọ, yabụ usoro ọzụzụ dị mma ga-adị mkpa.
Mmetụta ha nwere na-enyere ha aka ịta ahụhụ na nchekasị nkewa, yabụ nke a nwere ike ịbụ ebe Cockapoo na-enweta ya.
Poodle: Onye nwere ọgụgụ isi, na-arụ ọrụ, Hypoallergenic German Breed!
Ndị nne na nna Cockapoo nwere ike ịbụ Toy ma ọ bụ Obere poodle (nke a na-adaberekarị na Cocker na-eji).
Ejiri dị ka nke abụọ kacha nwee ọgụgụ isi nkịta n'azụ Collie.
Ha gbasiri ike ma nwee mmekọrịta. Poodles agaghị ata ahụhụ ndị nzuzu, na-achọ ọkwa dị elu nke mkpali na mmekọrịta.
Ọ bụ ezie na a na-akpọ uwe ha dị ka hypoallergenic, ị ga-ewere ya = na nkọwa ya kachasị mma.
Hypoallergenic pụtara na ọ ga-eme ka ọ bụrụ ihe nfụkasị ahụ. Uwe mkpuchi poodle ka nwere ike ibute nfụkasị. Hypoallergenic pụtara obere ihe (ọ bụghị onye ọ bụla).
Ọ bụghị ịbụ nkịta dị ọcha, Cockapoo amatabeghị ndị isi klọb ndị isi dị ka Klọb Kennel, American Kennel Club, United Kennel Club ma ọ bụ The Canadian Kennel Club .
Na nzaghachi, amalitere American Cockapoo Club.
ACC nwere ndepụta nke ndị na-azụ akwụkwọ edenyere aha ma mesịa debanye aha ụmụ nkịta ha na-edekọ ndekọ nke Cockapoos nke ọma.
Ndị na-azụ ihe ga-agbaso usoro ụkpụrụ omume wee mepụta ụmụ nkịta n'usoro ọkọlọtọ ha. Ebumnuche klọb ahụ bụ ịkwalite ụdị ma kwado ma ndị na-azụ ma ndị nwe ya.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịzọpụta Cockapoo, enwere ọtụtụ ndị otu nwere ike inye aka.
Eziokwu Cockapoo Dog Breed
Nha 10-15 sentimita (maka ụmụ nwoke na nwanyị)
Ibu ibu 12-24 lb (maka ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị)
Afọ ndụ Afọ 14-18
Adabara Ezigbo Ezinụlọ
Agba dị iche iche Red, Aprịkọt, Brown, chọkọleti, tan, Nwa, Merle
Iwe Ọpụpụ, Obi ,tọ, Egwuregwu, Ọgụgụ isi, Na-agbaghara
Aha ndị ọzọ Spoodle, Cockerdoodle, Cockapoodle, Cocker Spaniel Poodle Mix
Mgbe anyị jiri Poodle gafee Spaniel, anyị na-ejedebe nwa nkịta nwere ọgụgụ isi, nke nwere mmekọrịta enyi na ume.
N'ịbụ onye agwakọta, ị gaghị enwe ike ijide n'aka na njirimara nke nwa nkịta Cockapoo nke mbụ (ha nwere ike ịbụ Cocker karịa Poodle ma ọ bụ nke ọzọ).
Ọgbọ ndị na-esote na-adịkarị amụma , ihe atụ, mating abụọ Cockapoo nkịta ọnụ.
Ị maara ihe egwuregwu ụmụaka nwere ntakịrị ntakịrị ahịhịa nkịta niile?
N'ihi nke a, Toy Poodle kwesịrị ịbụ nna na Cocker nne.
Cockapoo litter size dịgasị, agbanyeghị ọ na-abụkarị n'etiti puppy 4-8.
Cocker ga - ebu ibu karịa Poodle, yabụ nke a na - egbochi nsogbu ọ bụla na nsogbu ọmụmụ!
N'ozuzu, mgbe ejiri Pọọlụ Miniature, ọ bụghị okwu dị otú ahụ nke nne na nna bụ nke.
Ego Ole Ka Cockapoo Na-efu?
Nkịta a na-ebu ọnụahịa ego, ya na ụmụ nkịta Cockapoo na-efu ego ọ bụla karịrị $ 800 . Havefọdụ amarawo ire $ 2000.
Otu nne na nna obere obere poodle ga - emepụta puppy dị obere karịa nne na nna ga - eme.
N'otu aka ahụ, Cocker ndị Bekee ga-emepụta obere puppy karịa nke America Cocker.
Ibu ha nwere ike di iche iche di iche iche, mana dika ntuziaka, Cockapoo zuru oke ga-abu ebe n’agbata kilogram iri na abụọ ruo iri abụọ n’abụ ma toozu oke n’ihe dịka ọnwa iri na abụọ.
The Cockapoo bụ nnukwu ike; ọ hụrụ igwu egwu.
Ha ga-bulie onu, gwuru mmiri, weghachite. Name kpọrọ ya, ha ga-eme ya. Ha hụrụ ndị obodo ha n'anya ma na-eme ihe ọ bụla ị gwara ha.
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na nrubeisi, ịdị gara gara ma ọ bụ ofufe bọọlụ, ị gaghị achọ onye ga-abụ ezigbo enyi. Inye gị chepụta ihe ha ga-arụ ọrụ maka, ha dị mfe ịzụ.
Ha ga-agba ụja, iji mee ka ị mata ihe na-anọghị ebe ma ọ bụ naanị n'ihi na ha na-agwụ ike. Mgbe ụfọdụ a Cockapoo ga-akwa ụja gabiga ókè site na obi uto.
Ọ bụghị ihe mgbagwoju anya, ya na nne na nna dinta, na Cockapoo nwere anụ oriri.
Ọ bụrụ na ha hụrụ osa ahụ, ha ga-apụ! N'ịbụ onye maara ihe nke ukwuu, icheta ọzụzụ abụghịkarị esemokwu, mana ọ ga-ada ada ma ihe dị obere na furry gafere.
Ebe ha emeghi ka ha di ike , na ndị a na-amachaghị ama maka ịbụ otu, ịzụlite adịghị mma yana enweghị mmekọrịta mmekọrịta na ọzụzụ nwere ike ịkpata agwa adịghị mma.
Akụkụ nwere mmetụta dị nro nke Spaniel nwere ike ịbịa ma ọ bụrụ na aghọtaghị ya ma jikwaa ya nwere ike ibute iwe ọgụ.
Okwesiri ịmara banyere ọrịa oke iwe, ọ bụ ezie na ọ dị obere, e jikọtara ya na Cockers .
Nke a bụ mgbe Spaniel ga-awakpo na mberede na-enweghị ịdọ aka ná ntị ọ bụla. Ọ na-adịkarịkarị na ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị na-acha uhie uhie. Ọ bụrụ na enwere ike ịchọta Cocker na ọnọdụ ahụ ma a na-azụ ha iji mepụta Cockapoo, mgbe ahụ nkịta gị nwere ike ịnwe ọnọdụ a.
Inweta obi ike ha n'aka nne na nna ha Spaniel na ọgụgụ isi site na Poodle ha, ụlọ ezinụlọ na-arụsi ọrụ ike zuru oke maka ụmụ okorobịa ndị a.
Na mmalite na gara n'ihu na-akpakọrịta na ọzụzụ, ha na-enwekarị enyi na enyi.
Ha ga-anabata anụ ụlọ ndị ọzọ, ụmụaka na ọbụna ndị bịara abịa n'okporo ámá.
Ihe dị mkpa bụ ikpughe site na nwata, ọ bụrụ na ịchọrọ ka nkịta ọ bụla mụta na ihe ma ọ bụ mmadụ ekwesịghị ịtụ egwu, ị ga-egosi ha nke ahụ.
Ọ na-aga n'ekwughị, mana mkparịta ụka n'etiti ụmụaka na nkịta ga-enyocha anya mgbe niile.
Ọbụna nkịta kachasị mma n'ụwa ga-enwe oke.
Kụziere ụmụ gị otu esi azụ nkịta, otu esi agụ asụsụ ha na otu ha si achọ ohere.
Nyere ha aka wulite mmekọrịta ha site n’egwuregwu, kamakwa gosi ha etu ha ga-esi wepụta mgbe nkịta ha zuru ezu ma ọ bụ oge ịnweta ohere.
Na mkpokọta, the Cockapoo bụ nkịta nwere mmekọrịta enyi na enyi, mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Ha na-eme nke ọma n'ụlọ na-arụ ọrụ ebe a na-enwe ihe ọ bụla na-aga.
Ihe omuma sitere na Poodle tinyere ike sitere na Cocker na-enye gi ezigbo enyi a maka njem obula.
Cockapoos nwere ike inweta orednọ nkịtị gwụrụ n'ụzọ dị mfe , ha nwere ike ịghọ ndị na-ere ahịa gabiga ókè ma na-ebibi ihe.
Ọ bụ ezie na ha bụ nkịta ezinụlọ na-ewu ewu, ọ bụghị ha kachasị mfe ijikwa ya mere na anyị agaghị adụ ha ọdụ maka ndị nwe oge mbụ.
Mgbe ebulitere ya n'ụzọ ziri ezi ma na-enwe mkpali zuru ezu, Cockapoo na-anụ ọkụ n'obi-ime ihe na-atọ ụtọ, na-enye ọzụzụ, na-agbasi ike, na-egwuri egwu ma na-akpakọrịta
A na-ahazi ha dị ka nkịta ndị obere na ọkara (dabere ma nne ma ọ bụ nna ha bụ Toy ma ọ bụ Mini Poodle).
Ọ bụ ezie na ha nwere ike dịgasị iche budata na nha , ha na-agbasaghị ịbụ ihe dị ka kilogram 12 ruo 24 n’arọ ma guzoro n’etiti 10-15 ”n’ogologo.
A Cockapoo kwesịrị ịbụ nke siri ike ma wuo ya.
Ha nwere ike ọsọ, arụmọrụ na ntachi obi. Ha agaghi egosi na ha di ala ma obu ogologo, ma ha agaghi ezi.
Isi ha gbara gburugburu nwere nkwupụta ọgụgụ isi na anya ha kwesịrị ịbụ aja aja gbara ọchịchịrị mgbe ejikọtara ya na imi ojii (ọ bụrụ na ha nwere imi aja aja, anya ha kwesịrị ịdị oji). Ihu ọkụ ọkụ ga-enwerịrị akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ma ọ bụ anya hazel.
Ntị ha ga-akụda, ala nke ntị ha kwesịrị ikwekọ na ajị agba ha.
You ga-achọpụta ha site na ihe nkiri ụmụaka ha .
Na Cockapoo na-abata n'ọtụtụ agba ma nwee ike ịbụ ihe siri ike, akụkụ, phantom ma ọ bụ agba agba.
Cockapoo nwere ụdị uwe atọ dị iche iche:
Uwe mkpuchi siri ike
O nwere ike buru oke ibu mana ọ bụ otu uwe.
Nke a na-eme ka ha dị elu na chọrọ chọrọ, ọ bụrụ na ịnweghị ike ịsa uwe ha kwa ụbọchị, ị nwere ike ịka mma ime ka ha belata obere.
N'azụ ntị ha, na armpits ha na ebe akwa olu ha / njikota ha niile bụ ebe dị mma maka ịmịkọrọ ọnụ na akara ga-apụta!
A ga-egbutu uwe elu ha na anụ ọhịa bekee.
Bịara ntị na ọrịa ntị, mee ka ntị ha dị ọcha ma wepụ ntutu ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa. Onye na-edozi gị nwere ike igosi gị otu esi eme nke a ma ọ bụrụ na ejighị n'aka.
Cockapoo zuru oke maka ụlọ ndị na-ekwo ekwo, ebe enwere ihe ọ bụla na-aga.
N'ịbụ ndị nkịta a ma ama, ị ga-eche na ha ga-adị mfe ilekọta. Nke a abụghị eziokwu kpamkpam.
Ha nwere ọgụgụ isi, gbasie ike ma nwee usoro ịhazi akwa nke ukwuu (dịka ị nwere ike ịhụ n'elu).
Ha nwere mmasị idebe uche ha. Ha ga-eji obi uto biri na ulo nye ha na-akpali ma dokwara akpọrọ romping gburugburu a ugbo!
Nri ziri ezi maka nkịta gị bụ nke ahụ na-ezute ihe oriri ha chọrọ , kwekọrọ n'ụzọ ndụ gị na mmefu ego gị.
Gbaa mbọ hụ na nri nwere protein zuru oke na abụba zuru oke iji nye aka na mmepe nkịta gị ma nye ike dị mkpa maka ịkpa egwu gburugburu ogige ahụ.
Nwere ike ịhọrọ ịzụ kibble akọrọ, mmiri mkpọ ma ọ bụ nke ndu, mana iwu isi mkpịsị aka bụ iji hụ na ihe mbido mbụ bụ isi anụ!
Dị ka nwa nkita, ọ kachasị mma ịzụ nri ugboro atọ kwa ụbọchị, wee belata nke a na nri abụọ mgbe etolitere. Nwere ike iji usoro nri nke 7am, 12pm na 5pm maka Cockapoo gị.
Ọ bụrụ na ha eribeghị n’ime nkeji iri na ise itinye nri ahụ, bulie ya ma dinara ala n’oge nri na-esote.
A maara Cockapoo nke ọma maka ịbụ onye na-eri anụ aghara , ya mere o nwere ike iwe gị nwa oge ịchọta ụdị nri na-amasị ha.
Nkeji Nkeji 90
Cockapoo gị ga-achọ ịgagharị kwa ụbọchị.
Cockapoo dị ike ma chọọ ije ije nkeji iri abụọ na ise kwa ụbọchị , megharia oge iji daba n'omume ha (cheta na ịbelata mmega ahụ mgbe Cockapoo gị bụ nwa nkita):
Izu asatọ - nkeji iri na-ejegharị ugboro abụọ n’ụbọchị
Izu iri na abụọ - nkeji iri na ise na-ejegharị ugboro abụọ n’ụbọchị
Izu iri na isii - nkeji iri abụọ na-ejegharị ugboro abụọ kwa ụbọchị
Ọnwa isii - nkeji iri atọ na-ejegharị ugboro abụọ kwa ụbọchị
Cockapoo gị ga-anwale ọrụ ọ bụla n'ihi na ha hụrụ naanị ọrụ n'aka!
Ha ga-aga ije, gwuo egwu, bulie ije, mee njem, gwuo mmiri, weghachite na ọbụnadị asọmpi bọọlụ ma ọ bụ aka ike. Guysmụ okorobịa a bụ ndị enyi zuru oke ma ọ bụrụ na ị na-ebi ndu ndụ.
Jide n'aka na ị debere ya na njikọ ya na anụ ụlọ, ebe ọha na-arụ ọrụ ma ọ bụ ebe ọ bụla ọ nwere ike banye na nsogbu.
Cockapoo na-abụkarị enyi na enyi, na-agbanwe agbanwe, na-emekọ ihe ọnụ ma na-achọsi ike-na-atọ ụtọ, na enweghị ọzụzụ kwesịrị ekwesị na mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ha nwere ike ibute oke egwu, ụjọ na ụjọ nke nwere ike ịkpata omume ike.
Otu Cockapoo ga-azaghachi nke ọma na nkwado dị mma na ọzụzụ dabere na ụgwọ ọrụ.
Ha nwere ọgụgụ isi, ya mere ha ga-edebe gị na mkpịsị ụkwụ gị. Mana ọ pụtara na ha na-eme ọsịsọ iji bulie ihe (nke ọma ma ọ bụ nke ọjọọ). Akụkụ dị mkpa nke Cocker nwere ike jupụta ebe niile wee zere iji ihe mgbagha na ụgwọ niile.
N'ịbụ ndị nwere ọgụgụ isi nke ukwuu, ha chọrọ oke mkpali ọgụgụ isi kwa!
Cockapoos nwere ike ịgwụ ike, nke na-ebute ọtụtụ omume ị na-achọghị karịsịa (ogbugbo, igwu ala, ịta nri, pining, mmerụ ahụ nke onwe).
Chọpụta ma ọ bụrụ na ha bụ nri ma ọ bụ ihe eji egwuri egwu na-akwado ma mepụta ụfọdụ egwuregwu ụbụrụ. Site na nketa ịchụ nta ha, ha na-eme nke ọma egwuregwu ịchụ nta .
Ihe a na-ahụkarị na Cockers na Poodles, Cockapoo na-ata ahụhụ na Atrophy Retinal Progressive nke nwere ike ibute ìsì.
A na-adụ DNA ule mgbe ịzụrụ nwa nkita.
Poodles na-ata ahụhụ na patella luxation nke bụ mgbe ikpere na-adịghị ịnọdụ ala n'ọnọdụ ya . Ọ bụghị ihe mgbagwoju anya, mgbe ụfọdụ Cockapoo nwere ike ịta ahụhụ na otu ọnọdụ ahụ.
Nke kacha mma maka ụlọ obibi, Cockapoo dị elu ma nwee ọgụgụ isi.
Ha na-anụ ọkụ n'obi-na-atọ ụtọ na ibu-trainable.
Nke ahụ kwuru, nke a bụ ikpe kachasị mma. Mgbe a kpalirighị ya nke ọma, ma ọ bụ zụọ ya ma ọ bụ soro ya kpakọrịta, onye ibe a na-ahụ n'anya nke ukwuu nwere ike ịka njọ.
Ha choro ndi nwere mmuta ma obu ndi raara onwe ha nye, ndi ghotara ha ma di njikere isoro otutu oge soro ha!
Mgbe a zụlitere ha, ha bụ ndị enyi maka ụmụaka na anụ ụlọ ndị ọzọ na ụlọ (ha nwere ike ịbụ anụ ụlọ zuru oke)!
Ihe omumu nke 60 nkeji kwa ubochi di nkpa, ya na otutu ulo oru.
Ha anabataghị ịnọ naanị ha, yabụ zere nke a na ụgwọ niile. An kemmasi ihe egwuregwu ụmụaka, agile na oru oma, na Cockapoo n'ezie nwere ike ime ya niile; site na ịgagharị ruo ọtụtụ kilomita iji gbagoo iji lee ihe nkiri.
Nkịta Labrabull: Ozi Ozu, Ọnọdụ, Puppies & Foto
Turmeric Maka Nkịta: Nri, Ezi ntụziaka, Uru Ahụ Ike & Mmetụta Ọgwụ
kedu ihe ị ga -akpọ anụ ọhịa wolf
German Shepherd Lab mix na -awụsa
kedu ka ị ga -esi nweta ụlọ nyocha ọlaọcha
nwa nkịta ojii na isi awọ German nwa nkịta
husky na ọlaedo retriever mix price
nkịta na -aga na -agagharị na ihe ọ bụla